version 0.5.7 - Pluggable ရှိဝစ်ဂျက်များ
ဇူလိုင်လ 11, 2010 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု 37 comments
ပေါလုသည် Transposh အဖွဲ့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းလျက်ရှိသည်
ငါတို့သည်ဤလောကဖလား၌သူ၏နောက်ဆုံးအောင်မြင်မှုအောက်ပါပေါလုကဘီယာ၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက် Transposh မှရေဘဝဲကဖိတ်ခေါ်. ကျနော်တို့ Transposh ၏လာမည့်ဗားရှင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည်ငါတို့အဘို့အနည်းငယ်ကိုဟောကိန်းများဖြစ်စေခြင်းငှါသူ့ကိုမေးခဲ့တယ်, နှင့်အလွန်အကျွံသောက်သုံးပြီးနောက်သူသည်ငါတို့မသူနှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်ယ့်သမဝါယမကတည်းက.
ထိုအပိုင်းထိုနောက်လတ်အသံတိတ်ဖြစ်လာ, နှင့် octopuses ကယ့်ကိုမပြောနိုင်ကြောင်းမှုများကိုလျစ်လျူရှုအားဖြင့်ငါတို့ကိုသတိပေး. ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကွက်နှစ်ခုလှည်သွားကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်, ကျမတို့ဟာကြီးမားတဲ့၏လှပသောရုပ်ပုံနှင့်အတူ box ကိုသွင်းထား, နှင့် feature တစ်ခု၏ရုပ်ပုံနှင့်အတူနောက်တစ်ဦး (ဟမ်?), သူ့ကိုဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်နှင့်ကျွန်တော်သူမထိုက်မတန်သည်ကိုမြင်ကိုမဆို box ကိုငံ့လ. ထိုကိစ္စကိုသူသည် bug ကို box ကိုဖွင့်လှစ်, ကျွန်တော်တို့ bug တွေကြောင့်ပင်ကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခြင်းမှတဆင့်ချော်စေခြင်းငှါပုံမှန်သတိပေးချက်ကိုရေးဖို့ရန်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်မြင်ဘူးသော (ပင် QA အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုအတွက်အလုပ်လုပ်ရှစ်လက်နက်ကိုင်ပရောဖက်၏အကူအညီဖြင့်). ငါတို့သည်လည်းပေါ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လမ်းညွှန်ရေးသားရန်အခွင့်အလမ်းကိုအသုံးပြု debugging ကိုများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး version ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝီကီပေါ်.
ပြီးခဲ့သည့်မှတ်စုကို, ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးလက်ကိုပေးပါစေလိုသည်သောသူမည်သည်ကား, (သို့မဟုတ်ခြေထောက်), သို့မဟုတ်လောကီသားတို့နှင့်မိမိအ widget ကဖန်ဆင်းခြင်းကိုမျှဝေဖို့လိုလားကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ကြိုဆိုထက်ပိုပါတယ်.
P.S – bug ကိုပြင်ဆင်ခြင်းများ၏ခါတိုင်းလိုရှယ်ယာ၌ရှိကြ၏, msn အတွက်အနည်းငယ်ဘာသာစကားကိုပြန်ဆို fixed နှင့် settings ကိုအနည်းငယ်ဘာသာစကားများထည့်သွင်း (ဆဲမက auto ဘာသာပြန်ချက်များ – ဒါပေမယ့်မကြာမီဖြစ်လိမ့်မည်)
Update ကို: တချို့အခြေအနေတွေမှာတွေ့ရှိတဲ့အရေးပါတဲ့ bug ကိုမှကျေးဇူးတင်စကား, 0.5.6 ချက်ချင်းနှင့်အစားထိုးခဲ့သည် 0.5.7 ဒီအစီရင်ခံသောသူအပေါင်းတို့ကိုသူတို့အဘို့ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပေ, dgrut အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနှင့်အတူ.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: Bing (MSN) ဘာသာပြန်သူ, အတုအင်တာဗျူးများ, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, widget က, wordpress မှာ plugin
မေ 21, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှု2comments
သဘာဝကျကျ, တိုင်းအဓိကလွတ်မြောက်ပြီး update တစ်ခုလာ. ဒီ update ကိုတကယ်အသေးကိစ္စရပ်တို့အားအဆင့်မြှင့်တင်ပေးထားကြောင်း (အရာပဲထိခိုက်ကျိုးပဲ့သော html – code ကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးချက်တခုလိုအပ်ပါတယ်?). ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက်ဖို့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ခဲ့သောဖာနန်နှင့်သူ Mike ကျေးဇူးတင်လို. ဒီလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ငယ်တစ်ခုလက်ဆောင်အဖြစ်ငါတို့သည်သင်တို့အထဲကကြိုးစားမှကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်အသစ်တစ်ခု widget ကအသွင်အပြင်ကဆက်ပြောသည်ပါပြီ, ပျော်ပါစေ! 🙂
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: အသေးအဖွဲ, widget က